Samsung waxay hoos u dhigeysaa Galaxy S6 musiibo iibka ah | Wararka IPhone
Samsung waxay hoos u dhigeysaa Galaxy S6 marka lala kulmo musiibo iib ah
Waa la ogyahay qofkasta oo indho yar ku leh suuqa in Samsung Galaxy ay yihiin terminaal lumiya qiimaha si yar oo deg deg ah, iyaga oo doonaya in ay ka helaan wax ka yar kala badh dalabyo xasaasi ah sanad kadib markii ay bilaabeen, taas oo niyad jab ku ah iibsadayaasha iibkaaga . Iyadoo Samsung Galaxy S6 aysan noqon doonin wax ka yar, iyo xitaa ka sii badan marka Samsung ay ka baqeyso calankeeda oo u muuqda inaysan soo sheegin dakhliga ugu badan ee ay tahay, ama ugu yaraan sida la filayo. Taasi waa sababta Samsung ay u go'aansatay inay hoos u dhigto qiimaha Samsung Galaxy S6 iyo S6 Edge illaa € 100.
Tani waxay ku timid ciribtirka natiijo kale oo aad u xun oo maaliyadeed ah, tii shanaad ee isku xigta ee dakhliga, waxayna u muuqataa in iibka Galaxy S6 uusan waxba ka caawinaynin, maadaama aan soo warinay bilooyin. Qeybta moobiilka ee shirkadda weyn ee Kuuriya ayaa la kulantay hoos u dhac aan waxba ka badneyn oo aan ka yareyn 37,6 boqolkiiba dakhliga, waxaas oo dhan waxaa sabab u ah iibinta iyo soosaarka xad dhaafka ah ee terminals-ka Galaxy S6 Edge, oo ka tagay iibinta daabacaadda caadiga ah ee Galaxy S6 maro yar yar.
Waa wax caqli gal ah in hoos udhaca sicirkani uu ur xun yahay, laakiin layaab ma ahan, marka loo eego iPhone-ka, way fududahay in laga helo suuqa, gacan labaad ama iib, Samsung Galaxy oo heeganka ku jirta, bilo yar uun kadib ku bilow qiimeyaasha u dhexeeya 50% ee qiimaha ay soo saareyso, Taasina waa wax ay dadweynuhu jecelyihiin waxyar iyo wax kayar, kuwaas oo ogaada inay ku iibsadaan shey qiimo aad u sarreeya isla markaana lagu qiimeeyo heerka wareerka.Tani ma ahan kiiska iPhones, kaas oo dayactira qaar ka mid ah qiimaha gacanta labaad ee ugu sarreeya suuqa haddii aan isbarbar dhigno baaxadda boosteejada iyo da'da qalabka.
Si ka duwan 37% hoos u dhaca Samsung Galaxy, iPhones waxay iibiyeen 35% in kabadan rubuc maaliyadeed. Maxay qaar uga tagaan waxa dadka kale urursadaan, xogtu waa soo bandhigaysaa. Intaa waxaa dheer, shirkado kale oo runtii karti leh ayaa soo galay muuqaalka Android, oo aan kaliya bixinayn wax isku mid ah, laakiin ka fiican, qiimo aad u jaban. Waxay u muuqataa in Samsung Galaxy uu ka sarreeyay qiimaha dhabta ah ee suuqa in muddo ah, tanina waxay ciqaabaysaa shirkadda Kuuriya, ha iloobin, waxay ku nooshahay taleefannada tirada yar ee dhamaadka-hooseeya ee daadadka shirkadaha taleefannada, qiime ahaan Qiimaha ugu hooseeya sida tayadiisa, laakiin taasi waxba ma noqonayso la'aanteed Samsung Galaxy S gadaashiisa siinta qiimaha sumadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Samsung waxay hoos u dhigeysaa Galaxy S6 marka lala kulmo musiibo iib ah
Sababta Taasi miyaanay ahayn wixii dadku weydiisteen?
Ku jawaab Mariano Mottassi Fernández
Waxay ahayd wax aad u cad .. Iyo in ka badan inta ay yeelan doonto inay soo dejiso, waxaa lagu guuriyaa naqshadaha iPhone-ka waxayna damacsan yihiin inay kaa iibiyaan si ka qaalisan! Hahaha, markaa waxay noo sheegeen in haddii aan iPhone ka bixinno € 800 ama € 1000 But Laakiin Esque geeskeeda s6 waxay ku haysteen € 1050 !!! Cajiib, taasi waa in lagu khiyaaneeyo macaamilka. Ma isbarbar dhigi karno tayada qalabka iyo dammaanadda  ayaa ugu fiican taas
Tani waa waxa ay tahay inay noqoto bedel iphone (qaali ah)
Jawaab Javier Imbernon Lopez
Waxaan hooyaday u soo iibsaday Samsung galaxy s6 edge color Emerald 128 gigabytes oo ah 1050 euro sida ay kor ku sheegaan ... (waxaan siiyay iyada oo leh dhalanteedka adduunka ee dhalashadeeda), iyadu way la joogtay 3 maalmood iyo ayaa leh dhibaatooyin wifi ah (ma ahan router-ka, waxaan iska indhatirayaa 6 iyo aabbahay s3 oo sifiican ula socda wifi), iyo kuwa kale oo la mid ah caymiska (seddexdeenaba waxaan leenahay Movistar oo leh optic fiber oo leh 100 megabyte) ...
Ma aqaano, waxaan u maleynayaa inay doonayeen inay nuqul ka sameystaan ​​istiraatiijiyadda qiimaha sare iyo alaabta qiimaha leh waana ku guuleysteen ... Waa inaan qiraa in S6 ay u qurux badan tahay agabkeeda oo ay wanaag ku dareemeyso gacanta ... laakiin maya I beddel iPhone-kayga 6 ee s6.
Dhowr bilood gudahood waxaan haysan doonaa s6 300 euro, taas oo ku dhacda s5 oo ah 150-200 euro.
Salaan ka dib (Waxaan faallooyinkaan kula qoray odaygayga taleefanka iphone 3G oo leh iOS 4.2.1
Qiimayaasha Android si dhakhso leh
Had iyo jeer waxay noqon doontaa nuqul Kuuriyaan ah (oo aan raqiis ahayn) Iphone ...
Haddii uusan ahayn iPhone ma aha iPhone .. Nuqulada ugu raqiisan
Jawaab ku samee Vidal Darlin Baez Tejeda
Maaha musiibo ka timaadda iibka, waa sababta oo ah isku dheelitir la'aan kama dhex dhacayso qiimaha s6 iyo kan cusub ee s6 + iyo qoraalka 5
Jawaab Jose V Pacheco Herrera
Wixii 4 galaxys ah waxay ku siinayaan 1 iPhone
Ku jawaab Quique Garcia
Galax s6 waa u qalantaa waxa ku kacaya. Waa mobiladii ugu horeeyey ee lagu daro processor 14nm, ram ddr4, ufs2 qeexida cusub ee xasuusta flash, kaamiro cajiib ah, laba jibbaar lacag la'aan wireless iyo naqshad heer sare ah iyo dhameyn (cirifka ama xitaa jimicsi qaab, waa horumar nashqadeynta warshadaha iyo soosaarka xarunta). Waxqabadka waa ilaa heer taasna waxaa lagu bixiyaa isla iPhone. Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay in ka badan ama ka yar qaabkeeda, sidaas, iwm. laakiin qiimaha waa qiil: ku darista teknoolojiyada ugu horumarsan suuqa qiimo ayey ku imaaneysaa. Nasiib darrose, dhibaatada Samsung ma ahan galaxdeeda s6 ama A, Alpha ama kala duwanaanta farqiga (boosteejooyinka tayada wanaagsan iyo waxqabadka oo sidoo kale u qalma waxa ay ku kacayaan), iyagu waa inta kale ee dhexdhexaadkeedu hooseeyo ee tayada liita iyo waxqabadka xun Markaa waxay siiyeen war xun ee android mot. motorolas, huwaweis, iwm. way yimaadeen oo waxay cunayaan suuq ballaadhan oo baaxad weyn oo dhex-dhexaad ah oo Samsung aan tartan ka jirin iyo lacag caddaan ah
Jawaab Ruben Gimeno
Dabcan, haddii uusan ahayn iPhone, ma aha iPhone
Jawaab Anibal Jaramillo
Istaraatiijiyadda u ekaanshaha sida iPhone-ka maxaa yeelay xitaa midabada aan nuqul ka sameeyay ma shaqeyn ...
Jawaab Angela Marcela Ortiz Hernandez
S6 waa terminal cajiib ah. Dhamaadyadu waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan qaababkooduna waxay kaa qaadayaan neefta laakiin… shaqsiyan marwalba waxaan u maleynayay in taleefankan uusan laheyn shaqsiyad. Kama qulqulayo awoodaas aan ku arkay s2 ama s3. Samsung ayaa sifiican markale wax uqabanaysa laakiin waxay leedahay nuqul badan oo naqshadeynta ah. Waxaan u maleynayaa samsung uma baahna inuu sameeyo waxyaabahaas.
Ku jawaab Franzuelo
Caadi ah, haddii ay u qalanto isla iphone-ka aad iibsato?, Jjajajjaaa.
Ku jawaab Santiago Trilles Castellet
Isla qiimahaas wuxuu leeyahay laba jeer Ram, laba jeer xallinta, laba jeer megapixel iyo shaashad casri ah ... Waxaan leeyahay cad
Horay waad u iibsan kartaa maxaa yeelay maadaama aysan iibin, wax badan ayey yareyn doonaan.
Juan Armando Gonzalez Lopez sawir-haye dijo
Alcatel ayaa ka qiimo badan kan Guatemala hahahahahahaha
Jawaab Juan Armando Gonzalez Lopez
Alberto Córdoba Carmona «About € 100»… Waxaan idhi, oo waxaan ku hagaajiyay oo kaliya nambarka 32GB ee namas, inta soo hartay «waxaan idinka rabnaa inbadan oo idinka ah»
Poooooos in ay halkaas ku dhejiyeen
Jawaab Jordi Mauri Farnós
Dad badan oo indhoole ah oo indhoolayaal ah runtii, waxaan u maleynayaa inaysan arkin ama gacmahooda ku qaadan s6 iyo had iyo jeer u diraan xukun isku mid ah had iyo jeer ... ) laakiin lama dafiri karo in Samsung ay kun jeer ku dhufato, uma baahnid inaad indho la'aan ama fanbo sabab la'aan
Jawaab Alejandro Velásquez
Kun laatiin Samsung, 10000000000000000 waxay siisaa iPhone iyo taquito.
Kujawaab Daniel Sequeira
waxaan ku siganayaa inaan iibiyo iphonekeyga oo caajis badan ku xayiraya nidaamkiisa macruufka oo ah wax laga yaqyaqsiiyo oo aan taageerin wax kasta oo fome ka dhigaya
Waa run, waxaan isku dayay S6 runtiina horumar ayay sameysay. Waxaan haystay dhammaan iphone-yada tan iyo markii ay soo baxeen waana markii ugu horeysay ee aan arko in Samsung uu ka fiicanyahay iPhone.
Hagaag, iyadoon loo eegin "bahalka" qalabka uu S6 haysto, waxtar uma leh nidaamka qalliinka maxaa yeelay Android waa nidaam guud oo la adeegsado oo ay tahay inuu ku shaqeeyo qalab kasta sidaa darteed, S6 macno malahan sida taleefan guud
Jawaab Milton Guzman
Easy Alejandro Jano samee JAILBREAK iyo dhibaatada lagu xaliyay sida ay u bedelayaan IOS x wax Shiinaha X Ilaah !!
Anigu waxaan ahay isticmaale iPhone 6 ah, 2 maalmood ka hor waxaan haystay geesta Galaxy S6 oo gacmahayga ku jirtay waxaanan moodayay inaan arkay qalab aad uga horumarsan kuwii hore, mar horena leh unibody terminal iyo shaashad shaashad aad u fiican, kamarad, iwm. Laakiin wali ma badalo macruufka.
Jawaab Erwin Peña Ibáñez
Haaruun Tenoury dijo
Waa maxay pringao in aan ahay ...
Jawaab Haaruun Tenoury
Jawaab Edson Torres
Waxaan hayaa iPhone 5, laakiin waa run oo Galaxy S6 waa qajaar taleefan. Xitaa sidaas oo ay tahay, waxay ku sii socotaa dhibaato la mid ah kuwii ka horreeyay ... In ay ka hoos shaqeyso Android ... Iyo ka hor inta aysan difaacayaasha OS oran inay u boodaan halgamaaga ama iigu yeerin fanboy, kaliya tilmaan in shaqada, aan shaqeeyo oo leh kiniin Android ah oo leh processor 4-core ah iyo 2 Gb oo Ram ah. Aniguna waxaan rabaa inaan idhaahdo kiniinku wuxuu sameeyaa wax xun oo xun. Way deldeshaa, barnaamijyada qaar aad ayey gaabis u yihiin, waxay leedahay dhibaatooyin WiFi ah, ogaanshaha shaashaddu waa wax laga naxo, iyo wixii la mid ah ... Dhinaca kale, sidoo kale waxaan la soo shaqeeyey iPad-ka oo iyagu waa farxad run ah ... Marka si kasta oo ay doontaba ha noqotee qajaar badan Samsung ayaa sameeya, marwalba waxaad la kulmi doontaa dhibaatada isticmaalka OS Android ...
Jawaab Erik LaManx
Dhamaadka sanadka waxay ku dambayn doonaan qiime kala bar qiimaha asalka ah iyo nidaamka ay ku shaqeeyaan weligood lama cusbooneysiin doono. Waxaan haystay s5 waligoodna lama cusboonaysiin
Ku jawaab Henry Aguirre
Miguelito Herrera (@abdihakin_moha) dijo
Waxaan haystay iPhone 3s iyo 4s halkaana waxaan ka bedelay Samsung S5 oo aad ayaan ugu faraxsanahay xawaaraha iyo tayada kamaradda, nidaamka qalliinka ayaa si dhakhso leh u socda. Waxaan ku shubay kaar 64GB SD ah wax dhibaato ahna haba yaraatee. Runtii waan jeclahay.
Samsung S6 haddii ay u egtahay wax badan sida iPhone 6 ... laakiin kaliya kuma eka sawirka, laakiin mar dambe ma dhigi kartid kaararka SD mana beddeli kartid batteriga. Waxaan u maleynayaa inay taasi ahayd qaladkii weynaa ee Samsung. Waxaan rajeynayaa inay taas ku soo celiyaan nuqulkooda soo socda.
Jawaab Miguelito Herrera (@mikelodiumboy)
Jay jiifay dijo
hahahaha naxdintaas ... musiibo ayay dhahaan! shirkad taageere u ah shirkad kale oo aan hal-abuurnimo midna lahayn ama na de na. kaliya way nuqulinayaan. jajajajja Waan qoslaa qosol go, ma maqashay? hahahaha kuwani waa macaamiisha uu Apple si rasmi ah uga hadlayey yes. haa haa, muxuu Apple yidhi, in macaamiishoodu doqon yihiin…. hahahahaha sii soco
Jawaab Jay Lay
Ku tuur wuea qashinka Alejandro Jano Tex janito dameer fiican waan u badali doonaa cecadora Jjjai
Ku jawaab Ximena Eloiza García
Miyaad taas ku beddeshay cabsidaada?
Fanatism ayaa kaa indho tiraya ... xumaan uma arko in qiimaha ugu wanaagsan ee isticmaalaha uu hoos u dhaco, markii uu cusub ee iPhone soo baxo kuwii hore way sii dhacayaan waa wax iska caadi ah macno malahanayso inay ku kacdo isla ... I ma jeclaan laheyd in taleefan uusan ka bixin wax ka badan € 200 waa la qiimeeyay shirkadaha iyo ganacsiyada ayaa ka faa'iideysanaya. Moobilku waligiis kama fiicnaan doono PC ama desktop hadana qiimahoodu waa isku mid iyo xitaa ka badan.
Villa Fort Donatien dijo
Fiiri qajaar Juan Alberto Vargas Mora
Jawaab Villa Fuerte Donatien
Pinhead Misfits waad ka faa'iideysan laheyd Iibkii weynaa
Jawaab Erika Corleone
Aniguba isku fikir baan ahay
Ku jawaab Frank Ramirez
Mana iibsadaan caag
Jawaab David Obregón
Hagaag, yaa doonaya inuu iibsado qashinka oo kale?
Jawaab GS PV Santos
Waxaa jira kaliya hal iPhone oo aan lahayn wax tartan ah, wuxuu la tartamayaa oo keliya naftiisa. Ruuxii iibsada Samsung ma daneeyo inuu yahay s6 ama inuu yahay LG ama Xperia. Adiguna ma bixin doontid isla lacagtaas. Apple waxay ku sii socotaa midkeeda siyaasad yar waxayna sifiican u shaqeyneysaa. Waxaa la cadeeyay in Ram yar iyo processor ka yar ay iPhone si fiican u shaqeyso. Dad badan ayaa sheegaya in ay helayaan iswaafaqla'aan iPhone. Hagaag, way igu dhacdaa markasta oo aan Android ka qaato xubin qoys ama saaxiib, waan lumiyaa waxaanan arkaa cayayaanka iyo waxyaabo badan oo ay IOS xallisay muddo dheer. Kuwa Samsung ayaa ikhtiraaca hal-abuurnimo waxna kuma hagaagayaan. Waxaa laga yaabaa in siyaasada Apple ee tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ay u soo muuqaneyso Aragtidiisuna waa.
Dhibaatada Samsung waa nidaamka ay ku shaqeyso, Android-kani waa qashinka nidaamka qalliinka waana sababtaas sababta aan loo iibin.
waxay kaliya abuuri lahaayeen Edge
Ku jawaab Andrew SD
Maxayse noqon doontaa ... waxaa la iiga tagay aniga iPhone 6
Jawaab Lenin Jaramillo Montalvo
maya maxaa yeelay waxaan jeclahay android no samsung = P
Jawaab Ricky Gomez
Maalinta ay Samsung joojiso gelinta Android ee Taleefoonadooda casriga ah oo ay samayso OS u gaar ah, waxay noqon doontaa maalinta aan bilaabayo inaan si dhab ah u qaato shirkadan.
Samsung ayaa S6 ka dhigtay taleefan ay ku soo jiitaan dadka isticmaala iphone-ka, laakiin waxay iska iloobeen dadka isticmaala S3, S4 iyo S5 ee doorbida inay awoodaan inay badalaan batariga, dhigaan xasuusta SD isla markaana ay leeyihiin taleefan aan biyuhu la socon. Gaar ahaan waxaan la joogi doonaa S5-ga, S6 iguma soo jiito. Haddii S7-ka aan mar labaad heysanno taleefan adag oo aan biyuhu la socon iyo naqshad isboorti oo dheeri ah, waan u tagi doonaa.
Sawirada cusub waxay muujinayaan badhamada mugga ee la xoojiyay ee iPhone 6s